अनलाइन फार्मेसीमा नेपमेड्स : कसरी दिन्छ सेवा ?
उपभाेक्ता कर्पाेरेट स्वास्थ्य
शिलापत्र संवाददाता काठमाडाैं, १५ वैशाख
अनलाइनमार्फत् फार्मेसी सेवा दिँदै आएको नेपमेड्स हाल नेपालमा प्रचलित मेडिकल एपमध्येको एक हो । यसका सम्बन्धमा सञ्चालक अम्बिका फुयाँलसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएकाे सामग्री :
के हो नेपमेड्स ?
नेपमेड्स एउटा एकीकृत स्वास्थ्य हेरचाह प्रणाली हो । एउटा व्यक्ति वा बिरामी जोकोहीलाई पनि घरमै बसीबसी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध वस्तु तथा सेवाहरू खरिद गर्न वा जानकारी लिन सक्ने एउटा उपयुक्त माध्यम हो ।
कसरी दिन्छ सेवा ?
अनलाइन फार्मेसीका चुनौती
अनलाइन फार्मेसी नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो । त्यसैले आमउपभोक्तासँगै सरकारी पक्षले अझै यसको उपयोगिता र महत्त्वबारे बुझ्न सकेको पाइँदैन ।
विकसित देशहरूमा यस प्रकारका स्वास्थ्य सेवाहरू विगत १५ वर्षदेखि नै प्रयोगमा छन् । उनीहरूका लागि यो कुनै नौलो सेवा होइन । नेपालमा केही महिनायता अनलाइन फार्मेसी सुरू भएको पाइन्छ ।
अहिले सम्पूर्ण औषधि बिक्रीको ०.५० प्रतिशतभन्दा कम मात्र बजार हिस्सा अनलाइन फार्मेसीले ओगटेको अनुमान गरिएको छ ।
नेपालमा औषधिको बजार
नेपालमा करिब ५५० करोड जतिको औषधिको खपत हुन्छ । यसमध्ये स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा ४५ प्रतिशत छ । प्रतिवर्ष करिब २२ प्रतिशत जतिले नेपालमा औषधिको बजार बढ्दै गएको अनुमान छ ।
विदेशबाट सामान खरिद गर्न सकिन्छ ?
नेपमेड्सका आगामी योजना
अहिले नेपमेड्सको अनलाइन फार्मेसी सेवा सञ्चालनमा छ । यसका ८० प्रतिशतभन्दा बढी नियमित ग्राहक छन् । त्यसैले निकट भविष्यमा नै अनलाइन कन्सल्टेसन, ल्याब तथा भ्याक्सlन सेवा थप गर्ने नेपमेड्सको तयारी छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख १५, २०७७, १३:०९:००